कोरोना भाइरस: बालबालिकालाई घरमै सुरक्षित र रमाइलो सिकाई
२०७७ श्रावण २९ बिहिबार
“ जसरी हाम्रो शरीरलाई प्रत्येक दिन राम्रो र मीठो खाना आवश्यकता पर्दछ, त्यसैगरी हाम्रो मस्तिष्कलाई पनि हरेक दिन राम्रो विचारको आवश्यकता पर्दछ
- महिला स्वास्थ्य
“ सय रोग एउटै दबाइ हाँस्न सिक्नु हो ।
२०७७ बैशाख २६ शुक्रबार
काठमाडौं - साना बालबालिका एक आपसमा सँगै मिलेर खेल्न रुचाउँछन् । तर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको बेला साथीहरूसँग भेटघाट गर्नु र ठूलो समूहमा खेल्नु सुरक्षित छैन। शारीरिक दुरी कायम गरेर हामी आफू र अरूलाई त सूरक्षित राख्न सक्छौँ, तर खेलका माध्यमबाट आफ्नो वरिपरिको परिवेश थाहा पाउने र साथीहरूसँग जोडिन सिक्ने साना बालबालिकाका लागि भने शारीरिक दुरी विशेष गरि चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ। तर उनीहरू घरभित्र रहेकै कारणले रमाउन सक्दैनन् वा केहि पनि सिक्न सक्दैनन् भन्ने चाँहि पटक्कै होइन।
यो समयमा नानीबाबुहरूको संसार फराकिलो बनाउन र उनीहरूसँग रमाइलो पल बिताउन केहि रचनात्मक खेलका उपायहरूअपनाउन सक्छौं ।
० देखि ९ महिनासम्मका शिशुहरूका लागि
यो खेल खेलाउनको लागि अभिभाबकको हात र मधुर बोलीको आवश्यक पर्छ । सुरुमा अभिभाबक आफ्नो शिशु लिएर कुनै एक स्थानमा बस्नुपर्छ । त्यसपछि अभिभाबकले आफ्नो हात वा सफा कपडाको टुक्राले आफ्नो अनुहार छोप्नुप्नुपर्छ, केहि छिनमा अनुहारबाट हात वा कपडा हटाउँदै ूदेखियो देखियो देखिएन भन्नुपर्छ । शिशुले रमाउँदै तपाईंको अनुहार एकैछिनमा हराएको र फेरि एकैछिनमा देखिएको हेर्नेछ। शिशु हुर्किँदै जाँदा आफै यो खेल खेल्न सक्नेछ।
हेर र भन
घर वरिपरिका फरक वस्तुहरूलाई देखाउने । तिनको नाम बताउँदै तिनीहरूको बारेमा थप जानकारी दिने। जस्तो कि कुनै एउटा बिरालो देखाउँदै, “उ हेर बिरालो देख्यौ त्यो खैरो बिरालो हो। “ यस्तो गर्नाले नानीबाबुहरूको भाषिक विकास हुनुको साथै अभिभाबक बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ।
आफ्ना नानीबाबुहरूसँग मिलेर गीत गाउने। साथै बाजा बनाउन एउटा सुरक्षित खाली प्लास्टिकको बोतल लिने । त्यसभित्र टाँक वा मालाका दानाहरू हालेर बिर्को बन्द गरी हल्लाएर बजाउन मिल्ने बाजा बनाउने। संगीतले बालबालिकाको संवेदनात्मक बिकास गर्दछ भने सो बाजा समाउने कृयाकलापले सुक्ष्म तथा स्थुल अङ्गको बिकास गर्दछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रचनात्मक हुनु र रमाइलो गर्नु हो।
आफ्ना नानीबाबुहरूलाई उनीहरूको शरीरको अङ्गहरूको नाम बताउने । ती अङ्गहरू देखाउँदै उनीहरूलाई अङ्गका नामहरू सिकाउन सहयोग गर्ने। जस्तैः नानीको नाक कहाँ छ रु यी, यहाँ छ। बालबालिकालाई आफ्नो र अरूको अङ्ग बिचको समानता थाहा दिन आफ्नो पनि सोहि अङ्ग देखाउनुपर्छ र आमाको नाक कहाँ छ रु लगायत अन्य कुराको जानकारी दिन सकिन्छ ।
१ देखि २ वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि
यो कृयाकलाप गर्नको लागि सबै भन्दा पहिले एउटा खाली बाकस वा कार्टुन लिनुपर्छ । त्यसमा सुरक्षाको लागि सफा एवमः नरम बाक्लो कपडा वा ब्ल्याङ्केट मिलाएर आरामदायी तरिकाले बिछ्याउनुपर्छ । त्यसपछि नानीबाबुहरूलाई त्यसमा राखि कुनै मोटर कारको ध्वनिलाई नक्कल गर्दै होसियारी पूर्वक वरिपरि धकेल्ने वा तान्ने गर्नुपर्छ। यस्तो कृयाकलापबाट नानीबाबुहरूले नयाँ खेलौनाको अनुभव प्राप्त गर्नका साथै घरको वरिपरि यसरी यता उता जान पाउँदा खुसी हुनेछन्। यस्तो गर्दा अभिभाबकले पनि शारीरिक कसरतको मौका पाउनेछन् । यदि घरमा धेरै खाली ठाउँ छैन भने केवल बाकसलाई दायाँ बायाँ हल्लाएर मोटर कारको ध्वनि मात्र भएपनि निकाल्न सकिन्छ।
यसको लागि सबै भन्दा पहिला भान्साबाट केही नफुट्ने वा नटूक्रिने किसिमका कचौरा, भाँडा र प्यानहरू ल्याउनुपर्छ । तिनीहरूलाई मिलाएर ड्रम सेटको शैलिमा राख्नुपर्छ। ड्रम बजाउनको लागि ड्रम स्टिकको रूपमा प्रयोग गर्न केही काठबाट बनेका पन्यूहरू आवश्यक पर्छ। त्यसपछि नानीबाबुहरू आफैंले रमाउँदै सो काठका पन्यू र भाँडाहरू बजाएर नयाँ ध्वनिहरू निकाल्नेछन्। यसले पनि तपाईंको शिशुको सुक्ष्म अङ्गको बिकास गर्दछ।
आफ्ना नानीबाबुहरूलाई मैनका रंगहरू र एउटा खालि कागज दिनुपर्छ। अब उनीहरूलाई इच्छा अनुरूपको चित्रहरू बनाउन लगाउने । यसले नानीबाबुहरूको सृजनात्मक कला उजागर गर्नको साथै आफै रमाउन सिकाउँदछ। जब उनीहरूले चित्र कोरेर सक्छन्, उनीहरूले चित्र बनाउँदा प्रयोग गरेका विभिन्न रंगहरूको बारे उनीहरूसँग कुरा गर्न सकिन्छ ।
एउटा नरम प्रकारको भकुन्डो ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि नानीबाबुहरू केहि छोटो दुरीको फरकमा आमने सामने गरि बस्नुपर्छ। त्यसपछि सो बललाई पालै पालो एक अर्को तर्फ पास गरेर खेल्नुपर्छ। यसले नानीबाबुहरूको आत्मविश्वास बढाउनका साथै हरेक कृयाको जवाफ वा प्रतिकृया दिन सिकाउँदछ। यसलाई अझै रमाइलो बनाउन अर्को भकुन्डो थप्न सकिन्छ र उनीहरूले कुनै एउटा छनोट गरे पछि उनीहरूसँग सो छनोटमा परेको भकुन्डो बारे कुरा गर्न सकिन्छ ।
३ देखि ४ वर्ष उमेरका बालबालिकाका लागि
विभिन्न भेषभूषा र पहिरन
केहि फरक किसिमका कपडाहरू लिने ।आफ्ना नानीबाबुहरूलाई ती कपडाहरूबाट विभिन्न भेषभूषा र पहिरन बनाउन लगाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले छानेको पहिरनको आधारमा सँगै खेल्नुपर्छ ।
म तिमीलाई समात्छु
घरभित्र वा वरिपरि खाली ठाउँमा नानीबाबुहरूलाई दौडन लगाउनुपर्छ र आफूले उनीहरूलाई समात्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो खेलले तपाईंका नानीबाबुहरूलाई धेरै थकाउनेछ । त्यसैले खेल खेलिसके पछि उनीहरूलाई छोटो समयको लागि सुताउन पनि सकिन्छ ।
आवाज पत्ता लगाऊ
आफ्नो शिशुलाई फरक फरक जनावरहरूको आवाजको नक्कल गरेर सुनाउनुपर्छ । उसलाई त्यो आवाज कुन जनावरको हो भनेर चिन्न लगाउन सकिन्छ। अब त्यसरी नै उसलाई पनि जनावरहरूको आवाजको नक्कल गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र आफूले सो जनावरको नाम बताउपर्छ। यसरी आवाज नक्कल गर्दा छनोट गरेका जनावरहरूकोबारे नानीबाबुहरूलाई अझ धेरै जानकारी दिने अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ।
बालबालिका आफ्नो शारीरिक परिपक्वतासँगै चुनौतीहरू सामना गर्न मन पराउँछन्। त्यसैले आफ्ना नानीबाबुहरूलाई आफ्ना पाखुरा उठाउने, हातले गोडाका औँलाहरू छुने जस्ता गाह्रा निर्देशनहरू दिनुपर्छ । यसले बालबालिकालाई शरीरका अङ्गहरूको नाम थाहा पाउन र उनीहरूको शारीरिक क्षमताहरूको पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउँदछ।
५ देखि ८ वर्ष उमेरका बालबालिका
नरम र सूरक्षित किसिमका फर्निचर, सिरानी र खेलौनाहरूको प्रयोग गरेर ठाउँ ठाउँमा अवरोधहरू बनाउनुपर्छ । शुरूमा कसरी यी अवरोधहरूबाट बँचेर दुरी पार गर्न सकिन्छ भनेर आफ्ना नानीबाबुहरूलाई देखाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई जति सक्दो चाँडो सो दुरी पूरा गर्न प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । यसको लागि घडि हेरेर दौडिन लगाउनुपर्छ । हरेक पटक उनीहरूलाई आफूले अघिल्लो पटक पार गरेको समय भन्दा कम समयमा दौड पूरा गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ ।
एउटा बाल्टिनमा पानी भर्नुपर्छ । त्यसमा नानीबाबुहरूको खेलौनाहरू डुबाएर पानीसँग खेल्दै नरम कपडाले खेलौनाको सरसफाइ गर्न लगाउपर्छ।
कथा बनाउन लगाउने
आफ्ना बालबालिकालाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ र उनीहरूलाई कुनै काल्पनिक कथा बनाउन लगाउन सकिन्छ । उनीहरूको कुरा राम्ररी सुन्ने उनीहरूले बनाएका काल्पनिक दुनियाँहरूको बारेमा प्रश्न सोध्नुपर्छ।
सँगै खाजा बनाउने
आफ्नो परिवारको लागि खाजा तयार गर्दा आफ्ना नानीबाबुहरूलाई पनि सहयोग गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । सकेसम्म धेरै रंगका खानेकुराहरू प्रयोग गर्ने चुनौती दिन सकिन्छ। खाजा तयार भएपछि पनि उनीहरूको क्षमता र इच्छा अनुसार प्लेटमा खाजा सजाउन दिने आफ्ना स्वादिलो शृजनासँग उनीहरू पक्कै खुसी र गौरवान्भित हुनेछन्।
(युनिसेफकी म्यान्डी रिचद्वारा लिखित)
राइट पाथ बिज्नेस नेट्वोर्क प्रा लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ६९४ /०७४- ७५
नया बानेश्वोर, काठमाडौँ, नेपाल
हाम्रो खोज : तपाइको प्रश्न
आश्मा बम ( मो. ९८६०४९९००५)
भागिरथी पण्डित/ सम्रिद्धा के सी
सयोजक (बजार ब्यबस्थापक )
शान्ति शर्मा ( मो. ९८६०१०३३२५ )
Mahila Swasthya - महिला स्वास्थ्य
© Right Path Business Network Pvt. Ltd. -2018 All rights reserved.